Cod U Qaadista Raysul Wasaaraha Cusub Oo Dib Loo Dhigay Waqtina Loo Qabtay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib u dhigay xilliga R/wasaaraha cusub Cabdiweli Sheekh Axmed oo hor imaanayo si loogu qaado codka kalsoonida.
Baarlamaanka oo maanta lagu weday in madaxweyne Xasan horgeeyo R/wasaare Cabdi Weli ayaa dib u dhac ku yimid, iyadoo taas sabab looga dhigay arrimo farsamo.
Xog-hayaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdil Kariim Xaaji Cabdi “Buux” ayaa sheegay in dib u dhacani ku yimid arrimo farsamo.
Wuxuu sheegay xildhibaan Cabdil Kariim Buux in R/wasaaraha cusub Cabdi Weli Sheekh Axmed uu baarlamaanka horimaan doono maalinta sabtida ah ee bishaan Decembere ku beegan tahay 21.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 22-kii bishaan R/wasaare u magacaabay Cabdi Weli Sheekh Axmed.
15-kii bishaan ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ka codsaday madaxweynaha inuu 18-ka bishaan baarlamaanka hokeeno R/wasaraaha cusub.